Dadku waxay su'aalo badan oo ku saabsan sida loo rujin Samsung Galaxy Nexus, GT-I9250, ordaya Android 4.2.1, si ay u helaan badan oo ku saabsan qalabka. Hadda, qodobkan ujeedadiisu tahay si ay u xaliyaan su'aashan la is weydiiyo aad u.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor soo afjarno Samsung Galaxy Nexus 4.2.1:
1. afjarno ka tirtiri doonaa damaanad.
2. Afjarno leben May qalab aad haddii aadan raac tilmaan.
3. Afjarno laga yaabaa in aad u hesho xog ku saabsan qalab lumay haddii aad si qaldan wax.
Tallaabada ugu hagitaan talaabo talaabo ah oo soo afjarno Galaxy Nexus I9250, 4.2.1
Diyaari shaqo u soo afjarno Galaxy Nexus 4.2.1:
1. kaabta oo dhan xog ku saabsan qalab aad hore (Sida loo kaabta Samsung Galaxy Nexus) .
2. Sahlo debugging USB, u tag Settings <Codsiyada <Horumarinta < calaamadee sanduuqa ka hor Debugging USB.
3. Sahlo ilo aan la garanayn, u tag Settings <Security <awood doorasho ilaha Unknow.
4. Download darawal ah USB Samsung on your computer.
5. Download Galaxy Nexus Qalabka 10.1
Tallaabada 1. Power off qalab aad hana xerto kombiyuutarka.
Hel Tallaabada 2. galay Fastboot Mode, saxaafadda Up Volume + Volume Down + Power badhamada waqti isku mid ah. Marka aad aragto cagaaran Start muuqday shaashadda, aad haatan waxaa ku xidhi kartaa si aad kombiyuutarka.
Tallaabada 3. Run GN xidhmo 10.1 (gaaban Galaxy Nexus Qalabka 10.1). On shaashadda, waxaa ku weydiin doonaa inaad hubiso update ah. Fadlan qor 'haa' iyo saxaafadda gala u dhaqaaqo.
Tallaabada 4. dooro version Android socda aad hadda qalab: 4.2.1 (JOP40D). Markaas galaan 7 iyo saxaafadda gala in ay sii wadaan.
Fiiro gaar ah: Haddii qalab aad xambaarsan E-Salada, fadlan geli 10, ama qalab aad reboot doonaa si joogta ah inta lagu jiro rooting ah.
Tallaabada 5. Halkan, waxaad heli doontaa liiska shaqada xidhmo GN ah. Ku qor 4 si ay u helaan ogolaansho xididka.
Tallaabada 6. Markaas waxaad u baahan doontaa in aad doorato kala doorasho rooting ah. Fadlan ka dooro mid labaad halkan: Device Root + rakib Busybox .
Tallaabada 7. Marka aad timaado halkan: Habka supperuser. Dooro labaad mid ka mid - SuperSU 1,98, ka dibna geli 'haa'. OK. Waxaad sameyn tallaabooyinka oo dhan ilaa halkan. Barnaamijku waxa uu bilaabi doonaa afjarno qalab aad si toos ah hadda.
Fiiro gaar ah: Haddii shaashadda mar walba sii joogo 'sugayaan qalab', waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo wadayaasha ADB. Sidee? Fadlan dib u soo talaabo, dooro kuwa 1 hoos menu ugu weyn, ka dibna dooran 4. Taasi waa OK.
Inta lagu guda jiro rooting ah, qalab aad si toos ah reboot doonaa dhowr jeer. Marka ay gebi ahaanba dhamaystiran, waxaad ka arki kartaa app ah - SuperSU daray saabsan telefoonka, oo aad si guul leh rujin Galaxy Samsung ee Nexus (i9250) 4.2.1.
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xidid Samsung Galaxy Nexus (GT-I9250) carar 4.2.1 Android